Myers Country Fumana-Away
Simi kwiikhilomitha ezingama-20 ngasentshona yeTulsa kwindawo entle eqengqelekayo yaseCreek County. Indlu iyinxalenye yeFama yeNtsapho yaseMyers, ifama esebenzayo kwiihektare ezingama-240 zemithi kunye namadlelo avulekileyo. Sifuye iibhokhwe, iinkomo, iinyosi zobusi neehagu. Kukho amachibi okuloba ama-2 okubambisa-n-ukukhutshwa (kufuneka azise i-tackle yakho) kunye neendlela ezininzi zokuhamba / ukubaleka / ukukhwela ibhayisekile. Eli lithuba lakho lokuba ube namava okuphila kwilizwe lokwenyani. Ixesha lebhokhwe leebhokhwe nguMatshi-Meyi.
Lo mhlaba uvalelwe kwaye unesango lokungena. Indlu yefama yakhiwa ngoo-1970 nguMakhulu noTamkhulu uMyers. Ihlaziywe ngokupheleleyo ngezixhobo ezitsha zombane, ii-countertops, umgangatho, ubushushu obuphakathi kunye nomoya, kunye noyilo "oluvulekileyo" ngakumbi ngelixa igcina umtsalane wayo we-rustic. Ungakonwabela ukutshona kwelanga okumangalisayo ngelixa uhleli kwindawo yomlilo kwipatio yangasemva.
Ukuba ungathanda ukubona ngakumbi, ndwendwela iphepha lethu leFcbook: "Myers Family Farm"
Siyimizuzu eyi-15 ukusuka eSapulpa kunye neekhilomitha ezi-5 kumntla weRt 66.
Ukhenketho lweefama ezikhokelwayo ziyafumaneka nge-50 yeedola. Ngokuxhomekeke kwixesha lonyaka, oku kungabandakanya imisebenzi efana nokuqokelela amaqanda, ukutyisa iinkukhu, ukutyisa iibhokhwe ngebhotile, ukubamba amantshontsho ebhokhwe, ukuxubha ikheshmere, ukutyisa iihagu, okanye ukuhambisa iinkomo. Ndingafumaneka ngomnxeba, itekisi, okanye i-imeyile nangaliphi na ixesha ngexesha lokuhlala kwakho. Usapho lwethu lusefama ngokunjalo.
Ukhenketho lweefama ezikhokelwayo ziyafumaneka nge-50 yeedola. Ngokuxhomekeke kwixesha lonyaka, oku kungabandakanya imisebenzi efana nokuqokelela amaqanda, ukutyisa iinkukhu, ukuty…